धतुराको तान्त्रीक उपचारबाट यसरी रोक्न सकिन्छ असमयमा हुने गर्भपतन, जानी राखौ
धतुराको तान्त्रीक उपचारबाट यसरी रोक्न सकिन्छ असमयमा हुने गर्भपतन
सेप्टेम्बर 13, 2019 सेप्टेम्बर 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, तान्त्रीक उपचार, धतुरा
धतुराको तान्त्रीक उपचारबाट यसरी रोक्न सकिन्छ असमयमा हुने गर्भपतन, जानी राखौ ! यो नितान्त गुप्त अनुभुत योग हाम्रो युगौ युगदेखि चल्दै आएको योग हो । मेरो बुबाले अरूलाई न सिकाउनु भनेर भन्नु हुन्थ्यो तर मेरो उद्धेश्य यस्ता औषधिको जानकारी हरेकलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यताले गर्दा आज पाठक सामु पस्कन गइरहेको छु ।
हाम्रो देशमा यस्ता अनेकौं जडिबुटी छन् तर स्वार्थ बस सवै हराउदैछन् वा भनौं लोप हुदैछन् । यसको ठोस कारण भनेको स्वार्थ भन्दा खासै फरक छैन । हामीले हमेसा सामाजिक हितमा काम गर्नुपर्छ । जानेको कुरा सिकाउदै जानुपर्छ । यस्ले बेफाइदा हुदैन फाइदा नै हुने गरेको पाइन्छ ।
आज हाम्रो देश अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण भनेकै स्वार्थ हो भन्दा खासै फरक पर्दैन । यो युगमा पनि तान्त्रीक बुटिले गर्भपतन रोक्न सक्छ भन्नुहोला तर रोक्छ । मैले नै प्रयोग गरेर हेरेको छु । यस्ता अनेकौं पल्ट मैले अनुभव लिएकाले आजको लेखमा जानकारी पस्कन गइरहेकोछु ।
तान्त्रीक जडिबुटी भन्दा कतिपयले सोच्नुहोला यसमा मन्त्र हुन्छ होला तर होइन यसमा केवल शुद्धताको खाँचो हुन सक्छ । मन शान्तिका लागि ॐ धनुन्त्राय नमह को जाप गर्न सक्नुहुन्छ । नुहाई सकेपछि जडिबुटी उखाल्नु पर्छ । उखालेको जडिबुटीलाई पानीले धोइसकेपछी कम्मरमा बाध्नुपर्छ । कम्मरमा बाँधेर ९ महिना पुगेपछि खोलेर नदिमा फाल्नु पर्दछ ।
कतिपय साथीहरुले सोची रहनुभएको होला यसको रहस्य चाडै खोलिदिए हुने थियो तर यो लेख राम्रोसंग पटक-पटक पढेर अनुभव गर्नु भएमा फाइदा उठाउन सक्नु हुनेछ । तान्त्रीक जडिबुटी नेपालमा प्रशस्त छन् तर नजान्नाले प्रयोग हुन सकि रहेका छैनन् ।
आउनुस म हजुरहरूलाई क्रमश: मेरो सास रहदासम्म सिकाउदै जानेछु । आजको यो लेखमा धुतुरा जस्तै थुप्रै जडिबुटीको तान्त्रीक प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रकाश पार्नेछु । मेरा हरेक लेख पढ्न नभुल्नु होला नत्र मेरो परिश्रम खेर जानेछ । यस्ता लेख पाउन गार्हो छ ।
धतुरालाई तान्त्रीक प्रयोग कसरी गर्ने ?
१. पटक-पटक गर्भपतन हुदै आएको छ भने यो तान्त्रीक विधी अपनाउनु होला अवस्य सफल हुनेछ । धतुराको जरालाई आइतबार शनिबार उखालेर ल्याउनुहोस् धुप बालेर यस्लाई शुद्ध पारेर सानो टुक्रालाई कालो धागोमा बाँधेर कम्मरमा बाँधी दिनुहोस् । ९ महिना अघि नफाल्नु होला पुरा महिना पुगेपछि निकालेर नदिमा बगाई दिनुहोला यो समस्या हल हुनेछ ।
नोट : विश्वासपुर्बक गरेको जस्तोसुकै काम सफल हुन सक्छ । महिलाहरूको असमयमा हुने गर्भपतन गर्भाशयको अन्य खराबीले पनि हुन सक्छ । अन्य खराबी देखिएमा डाक्टरको परामर्शमा उपचार गर्न सक्नु हुनेछ ।
बरको ताँन्त्रीक प्रयोग
आँकको ताँन्त्रीक प्रयोग
तुलसीको तान्त्रीक प्रयोग
अपमार्गको तान्त्रीक प्रयोग
तिलको तान्त्रीक उपयोग
जडिबुटीद्वारा हिप्नोटाइज्ड गर्ने तरिका
← सातौँ ‘राष्ट्रिय विज्ञान दिवस’ २०७६ को सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको तालिका
औषधिको रुपमा धतुराको प्रयोग →
पेप्टिक अल्सर र यसको घरेलु उपचार
मार्च 8, 2019 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
नोभेम्बर 1, 2018 साइन्स इन्फोटेक 6
रक्तचाप (Blood Pressure) भनेको के हो ?
मार्च 26, 2019 मार्च 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
One thought on “धतुराको तान्त्रीक उपचारबाट यसरी रोक्न सकिन्छ असमयमा हुने गर्भपतन”
Pingback: यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ धतुरालाई औषधिको रुपमा, जानी राख्नुहोस्
स्वास्थ्यको लागि केरा खानुका फाइदाहरु